Cajiibka Islamabad Khabiir Cilmi-gelin ah ayaa lagama maarmaan u ah shuruudaha marka la yareeyo boggaaga
Raadinta mashiinka raadinta waa inay had iyo jeer noqotaa midka ugu horreeya ee maskaxdaada oo hubi inaad raacdo talooyinka saxda ah. Iska-leexinta fikradahan muhiimka ah waxay ka dhigi kartaa aasaaska website-kaaga oo kaa horjoogsan kara inaad ka faa'iideysato fursadaha dakhligaaga. Sida milkiilaha ganacsiga internetka ah, yoolkaada ugu muhiimsani waa in la kordhiyo faa'iidada iyo in la sameeyo tan ay tahay inay noqoto tiro aad u tiro badan oo xiiseynaya alaabtaada iyo adeegyadaada. Si ay u noqdaan kuwo xiiseynaya, waa inay ogaadaan jiritaankaaga marka hore. Tani waxay gaari doontaa oo keliya haddii aad sahlan tahay inaad heshid markasta oo aad ka raadiso alaabtaada internetka - acompanhe seu pedido correios pac. Sidaas awgeed, raadinta mashiinka raadinta ayaa muhiim u ah kor u qaadista socodka gaadiidkaaga ee aad u socotid.
Michael Brown, Maamulaha Guusha Macaamiisha ee Kaabis , wuxuu ku faahfaahinayaa maqaalka waxa SEO ah.
Tani waa farsam-raadin farsamaynta hab-dhiska (search engine optimization) kaas oo muhiim u ah bixinta natiijooyinkaaga raadinta ee sare marka ay dadku raadinayaan alaab iyo adeegyo si ay u iibsadaan.
Waxaa jira talooyin asaasi ah oo ay tahay inaad raacdo haddaad rabto inaad wax ku ooliso natiijooyinka raadinta kuwaas oo ay ku jiraan.
Macluumaadku waa wax kasta
Mawduuca bogaggaaga waa boqorka. Habka aad u dejisid iyo naqshadaynta waxay qeexi doontaa sida goobtaada loo xulan doono. Xitaa haddii aad leedahay ereyada xaqiiqda saxda ah, haddii mawduucaagu uusan soo jiidan karin akhristayaasha, boggaagu ma noqon doono mid qiimo leh makiinadaha raadinta. Maadada waa inay ahaato mid gaar ah oo ka fogaato nuqulada. Waa inay muujisaa matoorada raadinta in aad noqon karto mid aad loogu kalsoonaan karo, tani waxay hagaajineysaa heerkaaga.
Ogow waxa makiinada raadinta raadinaya
Tani waxay kaa caawineysaa inaad la timaado waxyaabaha ku jira makiinadaha raadinta raadinaya, Google ayaa go'aamin kara ujeedka ujeedadaada..Tani waxay ku saabsan tahay cinwaanka, sharraxaadda, mawduucyada, iyo qoraallada loo adeegsaday qaybta. Mishiinada ayaa sidoo kale raadin doona waxqabadka goobtaada. Waa inay ahaato mid degdeg ah oo firfircoon. Waayo-aragnimadu waa inay sidoo kale noqotaa mid wanaagsan, oo soo jiidata dadka isticmaala iyo si sahlan u socdaalka. Sidoo kale waa inay noqotaa macne tayo sarre leh oo ah in goob kale ay u adeegsan karto tixraaca ama macluumaadka goobta.
Ogow habka ganacsigaaga wanaagsan
Ka hor intaanad dejinayn goobtaada, waa inaad ogaataa hadafyadaada. Tani waxay kaa caawineysaa inaad ogaato waxa kuu sahli kara inaad ku kordhiso barashada iyo waxa aad rabto isticmaalayaasha si aad uga heshid website-kaaga
Xogtaada waa in lagu dhajiyaa sharraxaadaha qaar sida mawduucyada metadata waxay caawiyaan akhristayaasha inay helaan bogag gaar ah. Fahanka qoraalka ayaa mas'uul ka ah xayeesiintaada internetka. Waa inay ahaadaan kuwo gaar ah oo aan lahayn koobiyo.
Noqoshada magacyada domainka
Si aad tan u gaadho, dooro magac sharaxaya astaantaada, oo hubi inaad sii wado gaaban. Ku hay joogto joogto ah. Waa fikrad aad u fiican haddii aad iibsato domain hore laakiin hubi in milkiilihii hore uusan sameynin wax kasta oo sumcad xumayn kara
Kala-xulashada natiijooyinka kala duwan
Nasiib-darro leh tiknoolajiyada la hagaajiyay maanta, dadku waxay internetka ka heli karaan qalab kala duwan oo ay ka mid yihiin telefoonada gacanta iyo kiniinnada. Markaad abuurayso mawduucaaga, waxyaabaha maskaxda ku hay. Waxyaalaha aadka u wanaagsan waa in ay taajir ku noqdaan fiidiyoowga iyo sawirada. Waxaad siisaa PDF-yada bilaash ah si aad u heshid credit-ka goobta mashiinnada raadinta
SEO ma aha oo kaliya tixgelinta content ee goobta. Kalluumeysatada waxaa lagu kordhin karaa meelaha kale sida Twitter, email, Facebook oo kaliya in la xuso dhowr. Sharaxaadyada goobahaas waa in la soo celiyaa maaddaama ay akhristayaashu dib ugu noqdaan goobta ugu muhiimsan
Ogow inaad ka fogaato
Waxaa jira waxyaabo mashiinnada raadinta aan jeclayn oo ay ku jiraan walxaha muhiimka ah, iibsashada xiriirka iyo khibrada dadka saboolka ah
La socoshada shuruudahaan waxay kaa caawineysaa inaad wax ka qabato natiijooyinka raadintaada si aad u kordhiso taraafikada website-kaaga